कुन मन्त्रीको कति शेयर ? – Sadarline
९ जेठ, नेपालगन्ज : सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले धमाधम आफ्ना सम्पत्ति विवरण पेश गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म १८ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय जनाएको छ । सार्वजनिक गरिएका सम्पत्ति विवरण हेर्दा नेताहरूमा भन्दा तिनका श्रीमतीमा बढी सेयर मोह देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति विवरणमा उनको नामको कुनै सङ्घ संस्थाको सेयर देखिँदैन तर उनकी श्रीमती राधिका शाक्यको भने २५ लाख रुपियाँ बराबरको वचतपत्र रहेको खुलाइएको छ । राधिका नेपाल राष्ट्र बैङ्ककी पूर्व कर्मचारी पनि हुन् । उनले प्रथम श्रेणीको अधिकृतमा रहेर काम गरेकी थिइन् । यस्तै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाममा पनि सेयर देखिँदैन । बरु उनकी श्रीमती मिरा पोखरेलको नाममा भने वरुण हाइड्रो पावरको १० हजार कित्ता सेयर छ भने कृषि विकास बैङ्कको २ सय कित्ता सेयर रहेको छ ।
मोर्डन कन्या मल्टिपल कलेजमा पनि उनको ५ हजारको सेयर छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पनि सेयर छैन तर उनकी श्रीमतीको नाममा भने अपर तामाकमोसी हाइड्रोपावरको १४६ कित्ता सेयर छ । उनकी श्रीमतीको नाम नैनकला थापा हो । यता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भने उनको र श्रीमती दुवैको सेयर खुलाइएको छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनः सम्पत्ति विवरण दर्ता वैशाख ३१ मा गरे पनि विवरण खाली छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भने रूपाकोट सामुदायिक रेडियो खोटाङमा ५ हजार रुपियँको सेयर छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवको भने सेयर छैन ।
उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको पनि उनको नाममा सेयर देखिएको छैन् तर श्रीमती जुली कुमारी महतोको नाममा गुडविल फाइनान्सको ७० हजार रुपियँ, एनभीपीएल प्रालिको ३७ करोड रुपियाँ, कर्पोरेट बैङ्कको २ करोड ५० लाख, लक्ष्मी बैङ्कको १ लाख ५० हजार रुपियँ, महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रमा ५० लाख रुपियँ बराबरको सेयर रहेको उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पनि श्रीमतीको नाममा मेगा बैङ्कको २६५ कित्ता, कृषि विकासको ४९ कित्ता सेयर रहेको उल्लेख
छ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको लालीगुरास सहकारी संस्थामा १० हजार रुपियाको सेयर, हाम्रो नव कृषि सहकारी संस्थामा ३ लाख रुपियाको सेयर रहेको छ । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पनि सेयर छैन । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको पनि सेयर छैन ।
सेयर बजार मैत्री नभएको भनिएर चिनिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सबल सहकारी संस्थामा ५ लाख र उनकी श्रीमती कमला खतिवडाको नाममा दुर्गा भवानी सहकारीमा ५ हजार रुपियाँ सेयर रेहको भेटिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माको कृषि विकास बैङ्कको ४ हजार कित्ता सेयर छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी गण्डकी विकास बैङ्कको २६ हजार रुपियाँ बराबरको सेयर रहेको छ ।
खानी खोला हाइड्रोपावरको ३० लाख रुपिया बराबरको सेयर पनि रेहेको देखिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादु तामाङको विवरण खाली छ । यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालको नामलेखिएको भए पनि विवरण खाली छ । बिना मगरको पनि विवरण खाली छ । उनी खानेपानी मन्त्री हुन् ।
सदरलाइनडटकम ९ जेठ, नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उप–महानगरलाई खुला दिसा मुक्तसँगै पूर्ण सरसफाई युक्त नगर बनाउन रणनीतिक योजना तथा नीति बनाएर लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिईएको छ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाद्वारा बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित खुला दिसामुक्त नगर घोषणा तथा पूर्ण सरसफाईका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई उपमेयर उमा थापामगरले रणनीतिक योजनाका साथमा अघि बढेमात्र […]
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १६:५३
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १८:३८
१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १५:४८